Windows 10 vs Windows 11: ọdịiche dị iche | Nzukọ mkpanaka
Daniel Terrasa | 18/10/2021 12:00 | Sistemụ arụmọrụ, Windows
Ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Microsoft dị ebe a na ọ bụ ihe a na -apụghị izere ezere na ndị ọrụ ga -ajụ onwe ha ajụjụ a: Windows 10 megide Windows 11. Kedu ihe dị iche n'etiti ha? Nke ọhụrụ a ọ ka mma n'ezie ma ọ bụ enwere akụkụ na -adịghị mma nke anyị kwesịrị ịma maka ya?
Site na mbido, ekwesịrị ikwu na Windows 11 na -abịa na njikwa onye ọrụ ọhụụ, nkesa ngwa ka mma yana mgbakwunye ndị ọzọ lekwasịrị anya n'okwu nchekwa. Na mgbakwunye, ụdị sistemụ arụmọrụ kachasị ọhụrụ na -enye ọtụtụ ndozi na ngwa yana ọtụtụ atụmatụ na -atọ ụtọ maka ndị egwuregwu.
E wepụtara Windows 11 n'ihu ọha ụbọchị ole na ole gara aga, na Ọktọba 5, 2021. Ọ bịara dịka mmelite efu site na Mmelite Windows Windows 10 maka kọmpụta na -ezute ụfọdụ nkọwa ọrụ aka akwado.
Ọ na -achọsi ike ịhụ ka Microsoft si mebie okwu ya, ebe ọ bụ na mgbe ọ malitere Windows 10 o kwupụtara nke ọma na ọ ga -abụ ụdị ikpeazụ nke Windows. Anyị ahụworị na ọ dịbeghị otú ahụ.
1 Ndakọrịta na chọrọ
2 Windows 10 vs Windows 11: myirịta
3 Windosws 10 vs Windows 11: ọdịiche
3.1 Nhazi ohuru
3.2 Panel wijetị
3.3 Mmelite na mpaghara ọtụtụ ọrụ
3.4 Ọrụ ihuenyo mmetụ emelitere
3.5 Ngwakọta ngwa Android
Ndakọrịta na chọrọ
Windows 11 ndakọrịta chọrọ
Mana tupu ị chee echiche mee mali elu site na Windows 10 ruo Windows 11, ihe mbụ anyị ga -eme bụ ịlele na akụrụngwa anyị dabara na ụdị ọhụrụ. Microsoft ewepụtala ngwa ọrụ maka ọrụ a: Nyocha Windows Health PC. Iji jiri ya, ị ga -ebu ụzọ debanye aha gị dịka onye otu Onye ndu Windows.
Eziokwu bu na chọrọ maka ịwụnye Windows 11 na kọmputa anyị, ha na -achọkarị ihe. Ha bụ ndị a:
CPU: 1 GHz ma ọ bụ karịa, cores 2 ma ọ bụ karịa, yana 64-bit processor dakọtara.
Nchekwa: 64 GB ma ọ bụ karịa.
RAM: opekata mpe 4GB.
Ihuenyo: 720 inch 9p ihuenyo.
Femụwe: UEFI, Ike buut ike.
TPM: Module Platform tụkwasịrị obi 2.0
Kaadị eserese: DirectX 12 dakọtara na ọkwọ ụgbọ ala WDDM 2.0
N'ikwu okwu sara mbara, ha bụ otu ihe achọrọ maka Windows 1st, ewezuga mgbawa TPM. Ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ịnwe nsogbu na -agba mmelite ahụ n'ihi ngwaọrụ a.
N'ọnọdụ ọ bụla, Microsoft emeela ka o doo anya na nrụnye nke Windows 11 agaghị ekwe na ngwaọrụ ndị na -emezughị ihe ngwaike achọrọ. Ha niile kwuru maka nchekwa, ha na -ekwu.
Windows 10 vs Windows 11: myirịta
Njirimara nke Windows 11 anaghị eweta nnukwu mgbanwe gbasara nke Windows 10
Windows 11 anọghị ebe a iji kụọ kpakpando na mgbanwe ma ọ bụ mgbanwe sistemụ arụmọrụ. Kama nke ahụ, a pụrụ ikwu na ọ bụ nzọ maka ịga n'ihu: ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa niile anyị na -eji na Windows 10 ga -enwe ike ịga n'ihu na -eji na Windows 11 na -enweghị nsogbu.
Onye ọ bụla wụnye ụdị ọhụrụ na kọmpụta ha (mgbe o mezuru ihe ndị achọrọ) agaghị enwe nnukwu nsogbu ịnyagharịa interface ọhụrụ ahụ. Sistemụ windo bụ otu ihe, na nchịkọta nhọrọ dị mfe ịchọta. O doro anya na ihe ịchọ mma bụ ihe dị iche, mana mgbanwe ndị a abụghị ihe siri ike.
Ihe onyonyo dị n'elu, nseta ihuenyo sitere na Windows 11, na -egosi nke a nke ọma. Ọdịmma na usoro nhazi. Ihe niile anyị nwere ike ịhụ na Windows 10 ga -adịkwa na Windows 11.
Windosws 10 vs Windows 11: ọdịiche
Mana ihe kacha atọ ụtọ gbasara Windows 11 bụ ihe ọhụrụ ọ gụnyere, nke anyị ga -enyocha nke ọma n'okpuru:
Gburugburu windo na mgbanwe imewe Windows 11 ndị ọzọ
Anyị ekwuola na ọ dị mfe ịmata interface ahụ, ebe ọ naghị apụ na paramita nke ụdị nke gara aga. Ka o sina dị, Microsoft emegharịala mpụta nke windo niile, karịa okirikiri na ịma mma.
Kpọmkwem otu ihe ahụ nwere ike ikwu maka menu onodu na Njikwa Explorer. Nke ikpeazụ ugbu a na -enye nlele dị ọcha karịa ka ọ dị na mbụ, yana iwu ndị a na -ahụkarị dị na ogwe ngwaọrụ ọhụrụ. Nsonaazụ nke a bụ na Windows 11's File Explorer na -ele anya nke ọma ugbu a. E wezụga nke ahụ, ọ na -enyekwa akara ngosi akara ngosi ọhụrụ dị.
Mgbanwe ndị ọzọ: a na -etinye taskbar ugbu a (Ọ dị ka macOS), ebe menu mmalite nwekwara atụmatụ okirikiri, na -enye nhọrọ ole na ole a na -ahụ anya. Iji chọta ngwa niile, ị ga -aga na ngalaba akọwapụtara nke ọma zoro ezo ka ị hụ n'azụ bọtịnụ "Ngwa niile". N'akụkụ aka nke ọzọ, menu mmalite ọhụrụ pere mpe, dị nkenke karịa Windows 10.
Ọhụrụ wijetị Windows 11 ọhụrụ
Otu n'ime mgbanwe kacha mkpa Windows 11 webatara bụ Mwepụ taịl Live. Mana enweghị nsogbu, n'ihi na nloghachi, o tinyela usoro nke wijetị ha na -arụ otu ọrụ ahụ. N'ezie, anyị agaghị ahụ ha na menu mmalite, ebe ha nwere panel nke ha.
N'ụzọ dị otú a, site na ogwe wijetị Anyị nwere ike ịgbakwunye, bugharịa ma ọ bụ gbanyụọ wijetị na Windows 11 n'ụzọ kachasị mfe.
Mmelite na mpaghara ọtụtụ ọrụ
Kpoo atụmatụ iji rụọ ọrụ na ọtụtụ ngwa n'otu oge
na snap aghụghọ Windows 11 na -arụ ọrụ na windo dị iche iche emepere na ihuenyo kọmputa anyị ruo ọkwa ọhụrụ. Site na njiri mara nke a, ị nwere ike họrọ nchapụta 6 dị iji hazie ngwa gị mepere emepe nke ọma. Na mgbakwunye, Windows 11 ga -eburu n'isi ngwa ndị mepere emepe ka ị nwee ike ịlaghachi na nhazi ahụ n'oge ọ bụla.
Naanị tinye cursor na ngwa ahụ na taskbar ma anyị nwere ike họrọ atụmatụ Snap jikọtara ya wee weghachite ya yana ngwa niile anyị na -arụ ọrụ.
na desktọọpụ e mekwala ka ha ka mma. Dịka ọmụmaatụ, ugbu a, ha na -enye anyị ohere ịhazi nzụlite nke onye ọ bụla n'ime ha. Ma ọ bụrụ na anyị na -arụ ọrụ ihe nlere anya, ihe ọzọ na -atọ ụtọ nke ukwuu: Windows 11 ga -ebuzi windo n'isi ma weghachite ya na akpaghị aka mgbe anyị jikọtara PC anyị na ihe nleba anya. Yabụ na anyị nwere ike ịga n'ihu n'otu ebe ahụ anyị kwụsịrị.
Ọrụ ihuenyo mmetụ emelitere
Windows 11 mmelite ihuenyo mmetụ
Windows 11 na -elekwasị anya nke ukwuu na arụmọrụ nke ihuenyo mmetụ. N'iji ọnọdụ a, menu ụlọ ga -apụ n'anya na akara ngosi na -ebuwanye ibu. Nke ahụ bụ, ha dị mfe igwu egwu.
Maka igodo dị mfe, agbakwunyere ụfọdụ mmeghari ohuru nke na -enye anyị ohere ịgbanwere ngwa ngwa ikpeazụ ejiri, laghachi na desktọpụ ma ọ bụ weghachite windo mepere emepe. Anyị nwekwara ike jiri mmegharị mepee View Task ma gbanye n'etiti windo ngwa na desktọpụ mebere.
El ahụigodo aka Ọ nwere nhazi nke ka mma, yana ọtụtụ isiokwu ịhọrọ site na ya. Enwekwara nkwalite ntinye ink. Ugbu a na -agụnye a "Menu pensụl" na ogwe ọrụ nke na -enye anyị ohere ịmalite ngwa ngwa. Ọzọkwa, ndị a pensụl Ha nwere nzaghachi haptic, yabụ anyị nwere ike na -eche mkpọtụ ka anyị na -eji ha. Mmetụta dị mma.
N'ikpeazụ, ọ bara uru ịkọwapụta ntinye nke a nkwado ntinye olu. Iji ya ị nwere ike tinye ederede ọ bụla na -eji igwe okwu.
Ngwakọta ngwa Android
Ngwakọta ngwa Android na Windows 11
Windows 11 na-enye nkwado ala nna maka ngwa Android N'ihi Teknụzụ Intel Bridge. Ọbụlagodi na ọ bụ teknụzụ Intel, ndị ọrụ AMD kwesịkwara inwe ike ịme ngwa gam akporo nke ọma.
Ebe ọ bụ na Microsoft emekọla ihe Amazon maka nnyefe ngwa, ọ bụrụhaala na kọmputa anyị dakọtara, anyị nwere ike budata ma mee ngwa site na Applọ Ahịa Amazon. Nke a bụ atụmatụ ọhụrụ kpamkpam. In Windows 10, ndị ọrụ aghaghị ịdabere na emulators gam akporo iji mee ngwa. A ga -emeri nke a na Windows 11, n'agbanyeghị na nsogbu ndakọrịta ka ga -ahụ.
Xbox Game Pass maka Windows 11
Ndị na -egwu egwu: Windows 11 gụnyere ọtụtụ atụmatụ sitere na Xbox Series X ọhụrụ iji nye ndị egwuregwu ahụmịhe kachasị mma. Dị ka ọmụmaatụ, Ntọala na -eme ka egwuregwu na -ebu ngwa ngwa site na NVMe SSDs. N'aka nke ọzọ, AutoHDR na -enye gị ohere ịgbakwunye nkwalite HDR na egwuregwu dabere na DirectX 11 ma ọ bụ karịa.
Agbanyeghị, nkwalite kachasị mmasị bụ iwebata Ihe eji eme njem Xbox, iji kpọọ utu aha ọhụrụ site na Xbox Game Studios na Bethesda. Nke ahụ pụtara ịnweta karịa egwuregwu 100 dị iche iche ịmalite.
Windows 10 vs Windows 11. Ọ bụ nkwalite pụtara ìhè na sistemụ arụmọrụ? Ọ bara uru ịwụpụ site n'otu ụdị gaa na nke ọzọ? Azịza ya bụ ee, ọ bụrụhaala na kọmpụta anyị emezu ihe achọrọ, ọ bụ ezigbo echiche ịwụnye Windows 11.
Agbanyeghị, ọ dịkwa mma ịmara na ọ nwere ike bụrụ na mgbanwe a nwere ike mepụta ụfọdụ nsogbu ndakọrịta ọzọ na ngwaike ochie na ihe ngwanrọ. Ihe, n'aka nke ọzọ, nwere ike ime mgbe ọ bụla ị na -aga site na nke ochie gaa na nke ọhụrụ. Ịkwesịrị ịtụkwasị obi n'ọrụ ndị mmepe Microsoft, bụ ndị n'oge ha doziri ọtụtụ njehie dị na mwepụta nke Windows 10.
Ya mere, ihe kacha mma ime kwaga na Windows 10 gaa Windows 11, bụ ichere ntakịrị. Ọ bụghị ọtụtụ, naanị izu ole na ole, ikekwe ọnwa. Mgbe oge kwesịrị ekwesị gasịrị, a ga-edozi ọtụtụ nsogbu ndị mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Windows 10 vs Windows 11: ọdịiche dị iche